Ogaden News Agency (ONA) – London Sideebaa Looga Xusay Sanad Guurada 30aad ee JWXO
London Sideebaa Looga Xusay Sanad Guurada 30aad ee JWXO
Jaaliyada Ogaden ee London ayaa qabatay Maanta Xuskii Sanadguurada 30aad ee Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya, Xuska Sanad guuradan oo isla maanta goobo badan oo Caalamka ah laga xusayo, ayay jaaliyada Ogadeniya ee Lodnon Si aad u quruxbadan munaasabadan usoo aggaasintay.
Munaasabada sanad guurada oo dad aad u badan kasoo qeyb galeen walina ka socota Halka shirarka jaaliyada London ayaa waxaa lagu Bilaabay aayadaha Quraanka Kariimka ah halkaas oo Xassan Sheekh Iraad uu kasoo jeediyay wacdi diini ah oo ku aadan Halganka kasocda Ogadeniya. Waxaana shirkan furay Gudoomiyaha Jaaliyada London Mudane Cabdicasiis Xasan oo kusoo dhaweeyay Qudbad Gudomiyaha JWXO khadka teleefanka kaga qeyb qaatay shirkan. Gudomiyaha Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya ayaa Qudbadan kaga hadlay Aasaaskii Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya illaa heerka maanta Halganka Ogadeniya marayo, duruufihii halganku soo maray iyo Guulaha Ciidanka wadaniga Xoreynta Ogadeniya kasoo hooyeen jiida hore ee daggaalka. gudomiyaha Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya waxa uu u hanbalyeeyay Shacabka Ogadeniya gude iyo dibadba isaga oo ku aamaanay taagerada ay u hayaan halganka Ogadeniya.
Shirkan waxaa ka qeyb qaatay Madaxda Sare ee Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya,
Gudoomiyaha Haayada Arrimaha Dibada ONLF,
Gudomiyaha Baarlamaanka JWXO,
Generaal Cabdullaahi Mukhtaarr,
Xildhibaan Khaalisa Ugaas Mahad
Xildhibaan Cusmaan Badal
Xildhibaan Daahir Tamuuje
Kuwaas oo dhamaantood ka hadlay Sanad guurada Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya iyo Halganka Ogadeniya mudadii 30 Sanno ee JWXO hormuudka u aheyd iyo maanta meesha uu marayo. Warbixinhaas oo aad ka daawan doontaan filimaan ay Ilaystv ka diyaarisay shirkan.
Waxaa kale oo Shirkan ka hadlay Ururada Bulshada Ogadeniya, Sida Ururka haweenka Ogadeniya ee UK, Waxaana halkaas ka hadlay gudomiyaha Ururka haweenka Roosa Cabdi raxmaan.
Sidoo kale waxaa Shirkan ka hadlay Ururka dhalinyarada Ogadeniya ee OYSU London, OYSU Birmingham, iyo OYSU Manchester.
Shirkan waxaa kale oo kasoo qeybgalay wafti kasocday Jaaliyadaha Manchester iyo Birmingham. Saalax Siraaja oo kamid ah Maamulka Jaaliyada manchester ayaa isna ka hadlay shirkan isaga oo hanbalyo u diray shacabweynaha Ogadeniya iyo Ciidanka JWXO.
Waxaa meesha ka madhneyn Suugaantii oo halkaas si aan caadi aheyn loogu soo bandhigay. Abwaan Maxamuud Cumar Jaango, Shugri Cabdirisaaq Gufeys, Cabbaas iyo haween iyo ragbadanba leh ayaa halkaas kasoo jeediyay heeso halgan iyo madjaajulo aad looga helay. Shacawbweynaha Jaaliyada Ogadeniya ee London.
Waxaan la ilaawi karin cuntadii macaaneed iyo macmacaanki iyo cabitaanadii laga bixiyay shirkan midaas oo si aad u weyn loogu ciiday, iyo Ducada loo sameeyay Halganka Ogadeniya si sanadkan midka ku xiga loogu ciido Wadanka Ogadeniya. Mudane Xaaji Diirane ayaa sheegay in wadankii culumo kamid ahi lasoo hadleen culumadaas oo shirkan soo gaadhsiisay Fariin ah. Waxaa culumo badan oo ku sugan Ogadeniya ku riyoodeen dhulka Ogadeniya oo Xor ah- Sanadka soo socda. Xaaji Diirane ayaa ku kaftamay isaga oo ka sheekeyay Qiso hada ka hor nin sheekh ah oo loogu riyooday Janada, markaasna ninkii nin saaxiib la ahi uu ku yiri waa run inaad ehlujano tahay oo midaas waan qabaa laakiin Riyo ha isku haleen ee xoogso. marka Xaaji Diirane ayaa sheegay in Culumado inshaaro wanaagsan sheegeen balse looga baahanyahay halgamaaga innuu dadaal la yimaado.
Shirkii wali wuu socdaa, waxaana hadli Doona Odeyaasha iyo waxgaradka Ogadeniya.
Ogadeniya ha xorwdo
Sanad guuro wanaagsan
Jaaliyada Ogaden ee London.